खाली हात चितवनको बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगे नेकपाका सहायक अध्यक्ष प्रचण्ड ! « Media for all across the globe
खाली हात चितवनको बाढी प्रभावित क्षेत्र पुगे नेकपाका सहायक अध्यक्ष प्रचण्ड !
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सहायक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नारायणी नदीको कटान रोक्नका लागि आवश्यक काम भइरहेकाले डर मान्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका वडा नं २७ र २८ को सीमाक्षेत्र न्यूरेचोकमा नारायणीले कटा गरेको क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै उनले तत्कालका लागि अस्थायी समाधानको काम नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र स्थानीयवासीले गरिरहेको बताए।
यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदसमेत रहेका दाहालले प्रधानमन्त्रीसँगको आजको संवादलाई छाडेर आफू निरीक्षणमा आएको बताए। उनी बाढी प्रभावित क्षेत्र चितवन जाँदा खाली हात पुगेको नेकपा एक नेताले जानकारी दिए। दाहालले आफू निर्वाचित भएदेखि नै राप्ती र नारायणीमा तटबन्धसहितको चक्रपथ अघि वढाएको बताए।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्य भइसकेको र बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा कुरा भईरहेको दाहालले जानकारी दिए। उनले सरकार सकारात्मक रहेकाले सो काम सम्पन्न हुने विश्वास दिलाए। पानीपरेपछि शुक्रबारबाट सो क्षेत्रमा नारायणीले कटान गर्न शुरु गरेको हो।